Media sosialy sy fahaketrahana - The Reward Foundation
Home News Blog Media sosialy sy fahaketrahana
Betsaka ny resaka nandeha tato ho ato momba ny hoe misy ifandraisany amin'ny fahaketrahana ny fampiasana ny media sosialy (SMU). Ity fandalinana vaovao ao amin'ny American Journal of Preventive Medicine ity dia milaza fa mety izany. Izahay dia mijery ny fampiasana ny haino aman-jery sosialy amin'ny drafitry ny lesona maimaimpoana momba Sexting, pôrnôgrafia ary ny atidohan'ny adolantsento. Nijery fahaketrahana matetika izahay Fiantraikan'ny pôrnôma.
Ity fandinihana vaovao ity dia nijery ireo amerikana 990 taona 18-30 taona izay tsy kivy tamin'ny fanombohan'ny fanadihadiana. Nizaha toetra azy ireo enim-bolana taty aoriana. Fampiasana haino aman-jery sosialy:
"Dia nifamatotra mafy tamin'ny fampandrosoana ny fahaketrahana nandritra ny 6 volana. Na izany aza, tsy nisy ny fifandraisana misy eo amin'ny fisian'ny famoifoizana eo am-panombohana sy ny fiakaran'ny SMU mandritra ny 6 volana manaraka. ”
Rohy mankany amin'ny Fahaketrahana
Notohizan'ny taratasy fa:
"Misy antony telo lehibe mahatonga ny SMU hifandraisany amin'ny fivoaran'ny fahaketrahana. Ny iray dia ny SMU mandany fotoana be. Amin'ity santionany ity dia nampiasa haino aman-jery sosialy nandritra ny adiny telo ny mpandray anjara antonony, nifanaraka tamin'ny vinavinan'ny firenena. Noho izany, mety ity fotoana be dia be ity no mamindra ny hetsika mety hahasoa kokoa ny olona, ​​toy ny fananganana fifandraisana manan-danja kokoa eo amin'ny olona, ​​ny fanatrarana ny tena tanjona, na koa ny fananana fotoana misaintsaina sarobidy.
"Ny antony faharoa mety hifandraisan'ny SMU amin'ny fampivoarana ny fahaketrahana amin'ny fampitahana eo amin'ny fiaraha-monina. Ho an'ireo tanora olon-dehibe, izay eo amin'ny fotoan-tsarotra momba ny fampandrosoana ny maha-izy azy, ny fampisehoana sary tsy azo tratrarina ao amin'ny tranokala media sosialy dia mety hanamora ny fiasan-tsaina mahakivy.
"Ny antony fahatelo dia ny fanelingelenana tsy tapaka ny sary an-tserasera dia mety hanelingelina ny fizotran'ny neurocognitive mahazatra. Ohatra, ny làlana nentim-paharazana mifandraika amin'ny fampandrosoana ny fifandraisana ara-tsosialy, toy ny fahalalana ara-tsosialy, ny fahalalana ny tena manokana, ary ny fanodinana valisoa ara-tsosialy, dia misy fifandraisana sarotra eo amin'ny faritra maro amin'ny atidoha toy ny dorsomedial prefrontal cortex, medial prefrontal cortex, ary ventral striatum.
"Na dia savaranonando aza ny fikarohana ao amin'ity faritra ity dia azo inoana fa ny fiasa amin'ny SMU, toy ny fihodinana haingana amin'ireo valisoa sy ny fizotran'ny kognitika, dia mety hanelingelina ny fivoarana ara-dalàna, izay mety hanamora ny fivelaran'ny toe-javatra toy ny fahaketrahana. Mila fikarohana bebe kokoa amin'ity faritra ity hanombanana ireo rafitra mety hitranga. ”
Ity fandinihana ity dia manome ny angona lehibe voalohany manadihady ny fitarihan'ny SMU sy ny fahaketrahana. Izy io dia mahita fifandraisana matanjaka eo anelanelan'ny SMU voalohany sy ny fivoaran'ny famoifoizana aorian'izay fa tsy misy fitomboan'ny SMU aorian'ny fahaketrahana. Ity lamina ity dia manondro ny fiarahan'ny nofo eo anelanelan'ny SMU sy ny fahaketrahana, ny fepetra ilaina amin'ny tsy fitoviana. Ireo valiny ireo dia manondro fa ireo mpitsabo miasa amin'ny marary ketraka dia tokony hanaiky ny SMU ho toy ny zava-dehibe mety hitranga amin'ny fampandrosoana ary mety hiharatsy ny fahaketrahana (nampiana fanamafisana).
Kopia feno an'ny Fikambanana ara-potoana eo anelanelan'ny fampiasana media sosialy sy ny fahaketrahana azo alaina amin'ny fidirana malalaka izao.